Myat Shu - 2011 April
You are here : Myat Shu » Archives for April 2011
Published By Myat Shu On Friday, April 29th 2011. Under ၀တ္ထု
တက်ပုအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် (၁) တစ်ခါသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ မြို့ကလေး၌ သက်သတ်လွတ် ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားခဲ့ဖူးလေ၏။ အရပ်ထဲမှ သိစပ်မြင်နှံ့သူ တတ်ယောင်ကား ပညာရှင်ကြီး အချို့က သက်သတ်လွတ်ဟု သုံးနှုန်းခြင်းသည် သင့်မြတ်ခြင်း မရှိ၊ သားသတ်လွတ်ဟု သုံးနှုန်းရန်သာ သင့်လှပါပေသည်ဟု မိန့်ဆိုကြ၏။ မည်သူတို့ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ထိုယဉ်ကျေးမှုကြီး ရောက်ရှိလာပြီး မကြာမီတွင် တောရကျောင်း ဥပုသ်ဇရပ်၌ သက်သတ်လွတ် ၀ါဒဆိုင်ရာ ငြင်းခုံပွဲကြီး တမုဟုတ်ချင်း ပေါ်ပေါက်လာလေ၏။ အဆို တင်သွင်းသူနှင့် ခုခံ ချေပသူတို့မှာ စကား အပြောအဆို အလွန် လက်ပေါက်ကပ်လှသည်ဟု နာမည်ကြီးသည့် အဘိုးကြီးများဖြစ်သဖြင့် တစ်နေကုန်တစ်နေခန်း အချေအတင် ပြောဆိုငြင်းခုံကြသော်လည်း အနိုင်၊ အရှုံး မပေါ်ချေ။ ငါမှန်လျှင် သူမှားရမည် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, April 27th 2011. Under ဆောင်းပါး
သည်တစ်ညတော့ ဟန်ကျလှပေ၏။ ညနေခင်းက မိုးပြင်းပြင်းတစ်ချက် ရွာလိုက်၍ အပူအအိုက်တို့ ကင်းဝေးကာ အေးတေးတေးဖြစ်နေသည်။ အိမ်နီးနားချင်းတွေလည်း စောစောအိပ်ရာဝင်ကြပြီး မိုးရေတင်ကျန်ရစ်နေသော လမ်းမပေါ်တွင် အသွားအလာ မရှိသလောက်နည်းပါးသွားခဲ့ပြီ။ တိတ်ဆိတ်သော ညလည်းဖြစ်ပြန်၊ ရာသီဥတုကလည်း နေလို့ထိုင်လို့ ကောင်းလောက်အောင်သာ အေးသမို့ ညဉ့်မိုးချုပ်မှ စာရေးစာဖတ်ခြင်း အလုပ်တွင် ပျော်မွေ့လေ့ရှိသော ကျွန်တော့်အတွက် မနောဟရ သဘောကျစရာဟု ဆိုလိုက်ချင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကံများကောင်းချင်တော့ လျှပ်စစ်မီးကလည်း ထိန်ထိန်လင်းနေလျက်ရှိ၏။ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရ။ ကျန်းမာရေးအတွက် သည်လေးပါးနှင့် ညီညွတ်ဖို့ လိုသေးသည်ကိုး။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ထိုကဲ့သို့ လေးပါးစုံလင် ဂုဏ်အင်္ဂါတို့ဖြင့် ညီညွတ်ပြည့်စုံနိုင်ခွင့် နည်းလှပေသည်။ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုတော့ ချွတ်ယွင်းချက်တွေရှိစမြဲ။ ထိုအခါ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, April 25th 2011. Under ဆောင်းပါး
နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ (Astrology) ၏ မူလဘူတသည် ရှေးယခင်က ဘာရတဟု သိကြသည့် အိန္ဒိယတိုင်းပြည်ပင်ဖြစ်သည်။ အနှစ်ရှစ်ထောင်ကျော် သမိုင်းသက်တမ်း ရှိခဲ့ပြီ။ နက္ခတ္တ ပညာရပ်နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို နိုင်ငံအများတွင် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်၌ တွေ့မြင်ရသည်။ တရုတ် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ဝေဒကျမ်းဂန်များမှတပါး ရှေးအကျဆုံးသော နက္ခတ်ဗေဒင် ပညာရပ်များကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသည်။ တရုတ်တို့သည် အိန္ဒိယမှ ဟိန္ဒူများကဲ့သို့ပင် ကျမ်းဂန်များကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရာ၌ စေ့စပ်သေချာမှု ရှိသည်။ ချေလ်ဒီယာ (Chaldea) ချေလ်ဒီယာဆိုသည်မှာ ဘေဘီလုံတို့ ကြီးတို့ခဲ့သော ဒေသဖြစ်ပြီး ယခုခေတ် အီရတ် တောင်ပိုင်းဘက် ဒေသဖြစ်သည်။ ချေလ်ဒီယာမှ နှောင်းပိုင်း နက္ခတ်ဗေဒင် ပညာရှင်များက ဘီစီ ၃၀၀၀ က ပေါ်ခဲ့သော ပညာရှင် ဘီရိုဆပ် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Monday, April 18th 2011. Under ဆောင်းပါး
"ခရုသင်းအနာနဲ့ ဘုရားကိုးဆူတို့မှာ မှုတ်တဲ့ ခရုသင်းက ဘာလို့ အခေါ်အဝေါ်တူတာလဲ" ပြီးခဲ့သည့် သင်္ကြန်အကြိုနေ့က မန္တလေးမြို့တော်ဝန်မဏ္ဍပ် ဖွင့်ပွဲတွင် ပုဏ္ဏားဖြူ၊ ပုဏ္ဏားညိုများ ခရုသင်းမှုတ်ကြသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပြီးနောက် ၎င်းပွဲမှ အပြန် လမ်းတွင် ဆရာနေ၀င်းမြင့်ကို ထိုသို့ မေးမိပါသည်။ ဆရာနေ၀င်းမြင့်သည် စာပေဟောပြောပွဲတွင် ပြောဆိုနေရသည့်အလား စကားလုံး တလုံး၏ ရာဇ၀င်ဇစ်မြစ်မှသည် တနွယ်ငင် တစင်ပါပြီး အခြားသော အကြောင်းအရာများကိုပါ ကျမ နားကားနိုင်စေရန် ရည်သန်လျက် တသီတတန်းကြီး ရှင်းပြတော့သည်။ "ခရုသင်းဆိုတဲ့ အရောင်လေးက အဖြူလည်း မဟုတ်၊ အညိုလည်း မဟုတ်။ အဖြူညစ်ပေါ့။ အောင်ပွဲတွေမှာ အောင်ပြီဟေ့.. အောင်စေ ပိုင်စေ စသဖြင့် အောင်အတိတ် အောင်နိမိတ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ ခရုသင်း မှုတ်လေ့ရှိတယ်။ ... Continue Reading
(၁) "ရော့… ဒီဆောင်းပါး ခင်ဗျား မှတ်မိသေးသလား။" စာရွက်ဝါ၀ါ နှုတ်ခမ်းပန်းနားဖွာဖွာ ဖြစ်နေသော သတင်းစာ ဖြတ်ပိုင်းဟောင်းကလေးတခု။ ကျွန်တော်တို့သည် ကိုကြည်မြ လှမ်းပေးသည့် သတင်းစာ ဖြတ်ပိုင်းကလေးကို ယူကြည့်လိုက်သည်။ "ကျွန်တော် သတင်းစာ ထုတ်ခဲ့စဉ်က" တမြန်နှစ်က "ဟံသာဝတီ" ဆောင်းပါးရှင်ဟောင်း ကိုကြည်မြနှင့် တွေ့သည်။ သူသည် သမိုင်းအကျိုးပေးကောင်း၍ တော်လှန်ရေးကောင်စီ အတိုင်ပင်ခံအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဖြစ်သွားသည်။ သတင်းစာလောကကို ပြန်စောင်းလှည့်၍ မကြည့်နိုင်တော့။ သို့သော် သတင်းစာလောကကို သူ မမေ့နိုင်သေး။ သတင်းစာသမားဘ၀ဟောင်းကို သူမမေ့နိုင်သေး။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ဟောင်းများနှင့် ဆုံမိတိုင်း စကားဝိုင်းဖွဲ့သည်။ ဇာတ်ကြောင်းလှန် နတ်သံနှောသည်။ အတွေ့ဟောင်း အကြုံဟောင်း၊ အဖြစ်ဟောင်း အပျက်ဟောင်းများကို အာညောင်းနားညောင်းအောင် စမြုံ့ပြန်သည်။ ကိုကြည်မြသည် သူတယောက်တည်းသာ တအောက်မေ့မေ့ အလွမ်းသယ်၍ အားမရလေရော့သလားမသိ။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, April 8th 2011. Under ဆောင်းပါး
ကျမ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်အကြိုနေ့ မနက်တိုင်း အတာအိုးနဲ့ နှစ်သစ်ကူးကို ကြိုလေ့ရှိတဲ့ အဖွားရဲ့ အပြုအမူကို နားမလည်ဘူး။ ကျမတို့ မန္တလေးမှာ အရင်တုန်းက သင်္ကြန်အကြိုနေ့ဆိုရင် စည်စည်ကားကားကြီး ရေပက်လေ့မရှိသေးပါဘူး။ ကလေးတချို့နဲ့ သင်္ကြန်ပျော် လူငယ်တချို့လောက်ပဲ ဟေးလားဝါးလား အဖြစ်လောက် ရေကစားကြတာပဲရှိတယ်။ သင်္ကြန်အကြိုနေ့အထိ ဘုရားကြီးဈေး၊ ရဟိုင်းဈေးတွေ ဖွင့်သေးတယ်။ အခုတော့ သင်္ကြန်လေးရက်စလုံးသာမက သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကတည်းကပါ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ရေပက်တတ်တဲ့ အလေ့တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ အဲလို သင်္ကြန်အကြိုနေ့ဆိုရင် အဖွားက ဘုရားကြီးဈေးကို သွားပြီး သင်္ကြန်တွင်း ချက်ဖို့၊ ပြုတ်ဖို့ အခြောက်အခြမ်းလေးတွေ သွားဝယ်တယ်။ ဈေးကပြန်လာတိုင်း သူနဲ့အတူ မြေအိုးလေးတအိုးနဲ့ သင်္ကြန်ပန်းစည်းလေးတစည်း ပါလာတတ်တယ်။ သင်္ကြန်ပန်းဆိုလို့ စပ်စုကြည့်မိပါတယ်။ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ... Continue Reading
အ.ထ.က (၁) ကျိုက်ထိုမြို့ မြတ်ဆရာ ပူဇော်ပွဲ
Published By Myat Shu On Thursday, April 7th 2011. Under လက်တို့ခြင်း
Published By Myat Shu On Wednesday, April 6th 2011. Under နှလုံးသားစာမျက်နှာ
ဤအဆောင် ဤနေရာသို့ မည်သို့ မည်ပုံ ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟူ၍ သူ မသိပါ။ သိအောင်လည်း မကြိုးစားခဲ့ပါ။ သူ့အသိတရားတို့ စုစည်းမိချိန်တွင် ဤကော်ရစ်ဒါ ထောင့်စွန်းက အုတ်လက်ရန်း အပြင်ဘက်စောင်းတွင် ရေးထားသော စာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းကိုသာ ပထမဆုံး အာရုံပြုသည်။ သူသည် ဒီစာကြောင်းလေး နှစ်ကြောင်းအတွက် ဖြစ်တည်လာတဲ့ သက်ရှိလား။ သူ့ကိုယ်သူ မဝေခွဲတတ်။ သေချာသည်မှာ သူသည် ဒဂုံတက္ကသိုလ် ရင်ခွင်အနှံ့ လွင့်မြောပြီး “သင်း” ရဲ့ မျက်နှာလေးကို ရှာမည်။ ကျန်အချိန်များတွင် “ဒီ” စာကြောင်းလေး နှစ်ကြောင်းနားမှာ နေမည်။ ဒီစာကြောင်း နှစ်ကြောင်းထဲက ကွက်လပ်လေးတစ်ခုသည် သူ၏ မွတ်သိပ်မှု ဖြစ်သည်။ သူ့အကြောင်းသူ သိပ်မသိသော်လည်း ဤကွက်လပ်ကလေးသည် သူ့အသက်ဆိုတာ သူသိသည်။ ... Continue Reading